Midowga Europe iyo midowga Africa oo ka shiraya kordhinta tababarrada ciidanka Somalida. – Radio Daljir
Brussels, May, 05 – Ururada midowga Africa iyo midowga Europe ayaa sheegay in ay eegayaan bal in la kordhiyo xilliga tababarada ciidamada amaanka ee wadanka Somalia iyo inkale.
Wadahadalada u dhexeeya Midowga Europe iyo midowga Africa ee ku saabsan sii wadista tababarada ciidamada amaanka ee dalka Somalia ayaa bilaabanaya dhamaadka bisha aan ku jirno ee May.
Hadal laga soo saaray magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium saldhigna u ah midowga Europe ayaa lagu sheegay in tababarada ciidamada amaanak ee Somalia ay xidhmayaan bisha August ee sanadkaan sidaa daraadena loo baahanayahay in wadahadal laga yeesho in la kordhiyo iyo inkale.
Tababarada ciidamada amaanka ayaa kasocda dalka Uganda waxaana halkaasi ku sugan tababarayaal ka socda midowga Europe oo hawshaasi gacanta ku haya. Midowga Europe ayaa go?aansaday in uu tababaro ilaa 2 batalyan oo ka mid noqonaya ciidamada amaanka ee Somalia.
Tababarada ciidamada amaanka ee Somalia ayaa lagu wadaa in loo raro iskuulo ku yaala meel kamid ah qaarada Africa. Warbixintaan oo qortay wakaaladda Allafrika.com ayaa lagu sheegay in taalabo kasta oo la qaadayo ay ku xirnaanayso sida laga yeelo xilliga kala guurka.